All weebụsaịtị, routers, & Laptọọpụ nwere adreesị IP 192.168.8.10. Ọ bụ otú ahụ ka kọmputa si mata naanị onwe ha na net ma ọ bụ na ntanetị. Emekarị, gị rawụta ekenye onye na Laptọọpụ na a obodo na netwọk. Kedu ka o si hụ na adreesị IP dị na PC mpaghara abụghị nke yiri ya na net? Maka ojiji nkeonwe, enwere ndekọ onu ogugu di iche (ulo oru, ebe oru, ulo, wdg.) Ndi a abughi ndi oru ha na webusaiti.
IP Address 192.168.8.10 is a onwe IP address. Enweghi ike ịjikọ IP n'onwe gị na IPntanetị, ịkwesịrị iji nsụgharị ntụgharị (Network Translator Translator, NAT) ma ọ bụ onye nnọchiteanya proxy iji jikọọ na IPntanetị. A na-akọwa adreesị IP nkeonwe na RFC (IPv6) 4193 ma ọ bụ RFC (IPv4) 1918.
192.168.8.10 na-pụrụ iche IP echekwara maka na-agbake routers admin njikwa. Nke a yana IPs dịgasị iche iche dịka ọmụmaatụ 192.168.8.200, 192.168.8.1, 192.168.0.35, wdg bụ nke ndị mba ụwa nabatara maka IP router. Na ndetu na ọ bụ ọbụna isiokwu “Ndi an-kpọ IP Gateway”. Ọ bụghị onye ọ bụla n'ime ndị na-agagharị agagharị bụ otu. Ọzọkwa, enwere ụzọ ndị ọzọ dị n'etiti ọtụtụ ụdị dịka ụlọ ọrụ. Azụmaahịa ndị a dị ka nbanye IP eji 192.168.8.10.
A 192.168.8.10 IP adreesị n'usoro 192.168.8.1 rue 192.168.8.255. Adreesị adreesị a ejiri na netwọkụ dị na mpaghara rawụta ga-ekewa na ngwaọrụ niile (laptọọpụ, M pad, Home Computer, Mobile phones, wdg).
The https://192.168.8.10 Adreesị IP na-esonye na Authorityntanetị Nyere Ọnụ Ọgụgụ ikike dị ka nke nke anaghị egbochi 192.168.8.0/24. Adreesị IP na naanị ohere anaghị ekwe ka ndị otu ole na ole & onye ọ bụla nwere ike iji adreesị IP na-enweghị ikike site na ụlọ ọrụ nbanye Internetntanetị dị ka akpọrọ RFC 1918, n'adịghị ka adreesị IP nkekọrịta.
IP 192.168.8.1 ruo 192.168.8.255 nso ebe niile IP 192.168.8.10 bụ akụkụ nke bụ a onwe IP nso na-emesi ụkpụrụ tupu-setịpụrụ na RFC 1918. Adreesị ka ihe atụ 192.168.8.10 na-adịghị kwetara na òkè Internetntanetị. Ọ bụrụ na netwọk nkeonwe chọrọ njikọ site na ịntanetị, ọ ga-eji dị ka ihe ntinye ma ọ bụ ihe nkesa dochie.
Gịnị mere adreesị dị ka 192.168.8.10 na mbụ?
Dị ka a dụrụ ọdụ, adreesị IP 192.168.8.10 bụ ngalaba nke netwọọdụ klas C pụrụ iche. Usoro nke netwọkụ dị otu a bụ 192.168.0.0 rue 192.168.255.255. Nke a na - eme ka adreesị IP ole na ole dị 65,535. Nke a gbatịrị agbatị na-ejikarị na netwọk nkeonwe dị ka ndị dị iche iche na-eme njem site na 192.168.1.1, 192.168.8.1, ma ọ bụ 192.168.0.1, dị ka adreesị ndabara.
Ọ bụrụ na ijikọ na netwọk na ekwentị, ma ọ bụ laptọọpụ, mbadamba, ị nweta adreesị IP dịka ọmụmaatụ 192.168.8.10 na ọnọdụ a.
All rawụta na-ijekwuru na ihe nchọgharị. Dekọọ https://192.168.8.10 na ihe nchọgharị ma ọ bụrụ na rawụta adreesị IP bụ 192.168.8.10. Ga-ahụ ebe nbanye. Kacha eji PWs & aha bụ: “1234” Admin ma ọ bụ “nil”. Biko hụ n'ihi nke rawụta ndia.
Ọ bụrụ na 192.168.8.10 abụghị IP rawụta, ịnwere ike weghachite IP rawụta site na iwu Ipconfig. Na-eweghachite web-ibe ha, ịnwere ike iji homepage nke ha site na ịde ederede n'ime adreesị ubi nke ihe nchọgharị weebụ & ị nwere ike ikwenye na paswọọdụ nbanye.